#Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya oo ku dhintay qarixii maanta - Get Latest News From Horn of Africa
#Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya oo ku dhintay qarixii maanta
By axadle On May 22, 2019 Last updated May 31, 2019
Wasiirkii hore ee Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Xuseen Ceelaabe Faahiye ayaa ka mid noqday ku dhawaad 10 qof oo maanta ku dhintay qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Qaraxa ayaa lala beegsaday bar koontarool oo laga ilaaliyo Madaxtooyada Soomaaliya waxaana ku geeriyooday dad isugu jira rayid iyo Ciidan.
Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa qoraal tacsi ah oo ay soo saartay waxaa uu u dhignaa sidan;
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Mudane Danjire Axmed Ciise Cawad, Wasiiru dowlaha Mudane Cabdulqaadir Axmed-kheyr Cabdi , Xoghayaha joogtada Wasaaradda Danjire Saciid Xaaji Maxmuud Faarax , Agaasimayaasha Waaxyaha, Safiirrada, Qunsulada Guud , Lataliyeyaasha Wasaaradda iyo dhammaan Saraakiisha Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga waxa ay tacsi u dirayaan ehellada, asxaabta iyo ummadda Soomaaliyeed geerida ku timid Allah u naxariistee Xuseen Ceelaabe Faahiye oo ahaa Lataliye Sare oo ka tirsan Wasaaradda oo maanta oo ah Arbaco, 22 May, 2019 u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay saaka agagaarka Daljirka Dahsoon ee Muqdisho.
Marxuum Ceelaabe oo noqday Wasiirka 13aad ee Arrimaha Dibadda ayaa ka mid ahaa xiliyadii dambe Guddi sare oo lataliyaal ah oo u xilsaaran dib-u-habeynta iyo horumarinta Siyaasadda Debadda. Marxuumka ayaa ahaa siyaasi, macallin, barbaariye iyo qof saaxiib la ahaa bulshada qeybaheeda kala duwan, isagoo ardayda ka caawin jiray fahamka cilmiga tirakoobka “Statistics”